Samee aragti sax ah oo abuur cusub joojinta awoodda leh Calaamada LED-ka
KHATARTA SARE EE MEEL KASTA
Qaab-dhismeedka Sawirka Dijital ah ee Avant-garde
Boodhadhka 'LED' ee loo yaqaan 'EACHINLED LED' waxaa lagu farsameeyay teknoolojiyaddii ugu dambeysay si loogu siiyo muuqaal jilicsan oo caato ah. Waxaa loogu farsameeyay aluminium qafiif ah oo anodized ah laakiin waara aluminium, si looga dhigo qaabka guud ee boodhka oo ka hooseeya 35kg, taasoo ka dhigaysa mid la qaadi karo oo sahlan in la rakibo.
Ku raaxayso mudnaanta inaad daawato ama aad fiiriso fiidiyowgaaga, maqalkaaga ama liistadaada liistada wakhti kasta, meel kasta oo ay ku taalo boodhadhka LED-ka. Ku cusbooneysii waxyaabahaaga dijitaalka ah qalabkeenna warbaahinta ku dhisan ee xoogga leh adoo adeegsanaya WiFi ama USB. Liiska shaashadda ee si fudud loo raaco ayaa ka dhigaya mid gebi ahaanba fudud jadwalka waxyaabahaaga isla markaana aan loo baahnayn qaabeyn isku dhafan!
Waad jeclaan doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee loo adeegsan karo iyo qaababka beddelka qaybta hore ee dhinaca kaliya oo leh magnet gacanta. Waad ku mahadsan tahay teknoolojiyadda bilaa xadhigga ah ee loo yaqaan 'wirelessless wireless technology' ee isku xidhka qaybaha. Haddana faa'iido kale, ayaa ku gaar ah boorkaaga LED-ka.
Module Mustaqbalka Smart-ka ah oo si xeel-dheer leh loogu dhex daray nidaam kasta oo ka dambeeya EACHINLED LED waa awoodda ay leedahay. Waxaa lagu farsameeyay hareeraha waxqabadka sare ee internetka Cyclone IV FGPA oo awood u leh ka shaqeynta isku midka ah, iyo isdhexgalka qotada dheer ee aaladaha maareynta MCU waxay awood u siineysaa moduleka bandhigga inuu iskood uga kooban yahay isgaarsiinta iyo maamulka. Si wada jir ah ayey u sameeyaan udub-dhexaadka 'Module Smart' waxayna soo bandhigaan aalado fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah, iyagoo hubinaya in dhammaan hawlgallada la isugu yimaado, taas oo markaa hubinaysa isku xirnaansho la'aanta sida hawlgallada kormeerka shaashadda iyo si isdaba-joog ah u ogaanshaha shaqada.
Barnaamijka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka ee horay loo soo dhejiyay ayaa awood kuu siinaya inaad kula xiriirto kombiyuutarka PC ama aaladaha hal meel adigoo adeegsanaya RJ45, WiFi, 3G, USB iyo HDMI Taas ayaa ka dhigaysa mid aad u fudud in la garto muuqaalkaaga oo aad maamusho goobaha sida dhalaalka iyo kala-soocida. Si toos ah qalabkaaga uga ciyaar qalabkaaga ha noqdo laptop, kiniin ama taleefan casri ah. Ku samee kontoroolka fiidiyowga ee dhexe iyo maaraynta internetka. Waxtarkaaga ayaa kordhay sababta oo ah waxaad tuuri kartaa kanaga fiidiyowga fog fog iyada oo aan loo baahnayn inaad haysato aalad kontoroolka goobta ama PC.administer oo aad ka ilaalisid fiidiyahaaga raaxada xafiiskaaga.
>>>>>>> Eeg nooca buuxa ee buuga alaabta PDF
Taxanaha Wareega Stadium P10 Dibadda Kubadda L ...